Senator Mwaura oo lagu sharfay dagaalka lagula jiro xuquuqda caruurta nugul – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Senator Mwaura oo lagu sharfay dagaalka lagula jiro xuquuqda caruurta nugul
Senator Mwaura oo lagu sharfay dagaalka lagula jiro xuquuqda caruurta nugul
Senator loo magacaabay Isaac Mwaura ayaa ku guuleystay aqoonsi caalami ah shaqadiisa naxariis darada iyo gacan ka gaysashada dagaalka loogu jiro xuquuqda caruurta nugul ee Kenya iyo daafaha adduunka.
Mr Mwaura ayaa ah qofka kaliya ee reer Kenya ee ku jira liiska 11 hogaamiye kooxeed ee sanadkan maamuustay Terre Des Hommes, oo ah hay’ad caalami ah oo fadhigeedu yahay Netherlands.
Aqoonsiga waxaa la sameeyay Juun 5, 2020, laakiin waxaa lagu dhawaaqay June 12, 2020, inuu ku soo beegmayo xuska Maalinta Caalamiga ee Ka Hortagga Caruurta nugul ee dadka albaaniska ah.
Mr Mwaura, oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga maaliyada iyo miisaaniyada, ayaa abaalmarinta ku tilmaamay sharaf weyn.
Markaan u adeegno aadanaha qalbiyadeena oo dhan, uma maleynayno in dadka qaar ogaadaan. Waxaa iga go’an inaan isbedel sameeyo xitaa haddii uusan qofna wax ogeyn. Farxadda inaan u adeego oo aan dhoolla-caddeeyo qof wejigiisa ayaa iga celisa, ”ayuu yidhi Isniintii.
Terres Des Homes waxay caan ku tahay u doodista xuquuqaha carruurta ka dhanka ah nooc kasta oo xadgudubka carruurta ah – dhiig-miirashada galmada, ka ganacsiga carruurta iyo ka shaqeynta carruurta dhexdooda kuwa kale – iyadoo la siinayo guryo ka mid ah gargaarka degdegga ah.
Kuwa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay senate-ka waxaa ka mid ah ninka nabada adduunka ee Nobel u fadhiya Kailash Satyarthi oo u dhashay India.
Mudane Mwaura waa xildhibaankii ugu horreeyay ee albinism-ka taariikhda Kenya isla markaana guddoomiye u ah Ururka Albinism ee Kenya.
Wuxuu sidoo kale gudoomiye u yahay guddiga la-talinta ee Innovate Now, xarun hal-abuurnimo curyaannimo caalami ah oo raadineysa inay horumariso tikniyoolajiyad caawisa si loo hagaajiyo nolosha carruurta iyo dadka waaweyn ee naafada ah.
“Hal shay oo aan u imid inaan aqbalo waa haddii aad ka timid koox loo arko inay tahay mid liita, guushaada ama guuldaradaada waxaa loo saarin doonaa xaaladaada ama xaaladaada. Dadka qaarkiis kuma arki karaan wax ka badan xadkooda iyo waxa ay u maleynayaan inaad tahay. Ha amaaalin muraayadaha indhaha si aad u aragtid naftaada, ”ayuu xusay Mwaura.
Wuxuu Keenyaanka kula dardaarmay inay is-qeexaan oo ay “u sheegaan oo u tusaan adduunka wixii alaab ah ee lagaa saaray”.
Ha ka xanaaqin guuldarooyinkaaga sidoo kale hana ka xishoon guulihii aad gaadhay. Waxaad ku jirtaa howl, mid sharaf leh, ”ayuu raaciyay.
Guurtida la magacaabay ayaa sidoo kale aasaastay Golaha Barlamaanka ee Naafanimada Kenya, waana safka koowaad ee noociisa ah kaasoo isu keenaya wakiillada dadka naafada ah ee baarlamaanka Kenya si ay u hormariyaan xuquuqdooda.
Waxaa caan ku ah u ololeeynta in carruurta is-dhexgalka lagu aqoonsado Kenya iyada oo loo marayo codsigiisa iyo sharcigiisa baarlamaanka waxaana uu gacan ka geystay in la helo Intersex Persons Society of Kenya (IPSK), oo ah hay’adda ugu muhiimsan ee dadka is-dhex gala ee ku nool Afrika.
Wuxuu sidoo kale ku riixay gelitaanka ardayda naafada ah jaamacadda fasal hoose sida tallaabo wax ku ool ah.
Previous articleBeesha caalamka Oo Ka hadashay gogosha Maamul Goboleedyada ee uu Fidiyey Madaxweyne Farmaajo.
Next articleKenya Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii rakaabka